Guddoomiye Muuse Biixi oo Ka Qaybgalay Daawashada Ciyaar Kubadda Cagta ah oo ka Dhacday Garoonka Gacma-dheere |
Guddoomiye Muuse Biixi oo Ka Qaybgalay Daawashada Ciyaar Kubadda Cagta ah oo ka Dhacday Garoonka Gacma-dheere
Hargeysa 04 June 2017 (GNN)- Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaxweynaha ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka qaybgalay daawashada ciyaar kubadda cagta ah oo garoonka Kubadda Cagta ee Gacma-dheere ee caasimadda oo maanta ku dhexmartay kooxaha Original iyo Tulpimilk.
Daawashada Guddoomiyaha ee ciyaarta ka dhacday garoonka Gacma-dheere waxa kala qaybgalay Guddoomiye-ku-xigeennada Labaad iyo Saddexaad ee xisbiga KULMIYE – Md. Axmed Cabdi Dheere iyo Xuseen Aadan Cadde, xildhibaanno, siyaasiyiin iyo taageerayaasha kooxaha iyo tartankan oo aad u tiro badan.
Dhallinyarada iyo waayeelka ku dhaqan xaafadda Goljano ee uu garoonkani ku yaalo, ayaa iyaguna si weyn Guddoomiyaha ugala qaybgalay daawashada ciyaartan oo xammaasad gaar ah lahayd, waxaana madasha ka muuqday siyaasi Xasan Cabdi Maxamuud (Xasan-xaydh), Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin (Cabdiraxmaan Dheere) iyo siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda xaafadda Goljano oo daawashada ciyaartan qaybtooda ka qaaatay.
Intii ay ciyaartani socotay waxa Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE – Md. Axmed Cabdi Dheere uu guddoonsiiyey maamulka garoonka Gacma-dheere agab-ciyaareed ay kamid yihiin kubado, koobab iyo billado qayb ka ah deeq xisbigu ugu talogalay dhallinyaryada ka qaybgelaysa tartannada degmooyinka iyo gobollada dalka oo dhan ee bisha Barakaysan ee Ramadaan.
Xaafadda Goljanno ee magaalada Hargeysa oo uu garoonka kubadda Cagta ee Gacma-dheere ku yaalo, ayaa ah xaafaddii uu guddoomiyuhu yaraantiisii kusoo barbaaray, waxaanay xusuustaas hore keentay inuu saacado waqtigiisa ka mid ah la qaato dhallinyarada maanta ciyaaraysay iyo dadweynihii daawnayeyba.
Dadweynaha ka qaybgalay daawashada ciyaartan, ayaa soo dhaweeyey Guddoomiye Muuse Biixi iyo waqtiga badan ee uu la qaatay, taas oo galisay yididiilo iyo rajo la xidhiidha inuu Guddoomiyuhu yahay nin bulshadiisa dhexgalaya oo ka war-haynaya.